Shiinaha Factory Ball Supply Direct Supply Ball Joint-Z12069 saarayaasha iyo shirkado | TANGRUI
Jidhkeenu wuxuu ka kooban yahay kala-goysyo badan. Kala-goysyadu waxay naga caawinayaan inaan u dhaqaaqno si firfircoon oo dabacsan, dhaqdhaqaaqani wuxuu yareeyaa saameynta. Isku-xidhka kubbadda ayaa la mid ah isku-xidhka ka joojinta gaadhiga. Ku xir inta u dhexeysa gacanta koontaroolka iyo garabka.
Maxaa kubbada loo qabtay?
Si loo xakameeyo gaariga, waxaa loo baahan yahay in giraangiraha hore loo rogi karo jihada la doonayo. Farsamaynta isteerinka waxaa loo isticmaalaa in si sax ah loo wareejiyo giraangiraha, iyo kubbadda qaadista waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro kaameradda wareega ee kabaalka. Isticmaalka wadajirka kubbadda ee frets wuxuu u oggolaanayaa isku imaatinka xarunta inuu wareego dhidibkiisa isla mar ahaantaana uu yeesho xiriir dabacsan oo lala yeesho kabayaasha, taas oo aad muhiim ugu ah howlgalka ganaaxa.
Qaab dhismeedka kubbadda wadajirka ah.
Mashiinnada taageerada kubbadu waa qaabab kala duwan, laakiin qaabdhismeedka iyo mabda'a shaqadoodu waa isku mid. Laydhka kubbadda sare iyo hoose labadaba waxay ka kooban yihiin: farta dunta (ama jeexdin) iyo isku-xidhka kubbadda, guriyeyn, polymer xajin, mashiinka wax ku qabta iyo dabool. Sidoo kale, taageerooyinku waa nooc burbursan oo aan kala sooc lahayn. Markii hore, badanaa had iyo jeer dayactirka kubbadaha kubbadda ayaa lagu dhaqmi jiray, waxay ka koobnayd beddelidda qaybta caagga ah. Dayactirrada noocan oo kale ah waxay dib u soo celiyeen taageerada cufnaanta hore ee dhaqdhaqaaqa. Laakiin, qaabkan soo kabashadu dib uma soo celin kalsoonida hore ee farsamada kubbadda, maxaa yeelay curiyaha polymer ayaa la beddelay, fartiisuna waa sii duugoobi doontaa, iyo inta lagu jiro hawlgalka dheer ee fiiqan, waxay samaysan kartaa microcracks oo horseedi kara burburka bir ah oo xaalad deg deg ah ka abuurta wadada. Wareegyada kubbadda casriga ee gaariga, inta badanna waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo qaab dhisme burburi kara, ka dib guuldarrada, waa in la beddelaa. Iyo waxa la iibsado, dusha sare iyo hoose ee kubbadaha leh xargaha qiimo jaban, dukaanka khadka tooska ah ee dukaamada qaybaha "Tangrui" ayaa kaa caawin doona, waxaa ku yaal noocyo kala duwan oo ah dhammaan qaybaha dayactirka iyo qalabka qiimaha soo jiidashada leh. Si aad ugu bedesho kubbadaha lagu xidho gawaarida Lada gawaarida hore, gadaal ama wadista gawaarida oo dhan, waa inaad la xiriirtaa xirfadlayaasha, xarunta adeegga, ama haddii aad leedahay rabitaan iyo qalab qaar, waxaad sameyn kartaa dhammaan dayactirka naftaada.
Marka la dhexgeliyo isku-xidhka kubbadda, qaybta ka joojinta gaadhigu waxay leedahay dhaqdhaqaaqyo ballaadhan. Isku-xidhka kubbadda ayaa u shaqeeya si qaybaha hakinku ugu dhaqaaqaan jihooyin kala duwan, ma aha oo keliya jiho gaar ah. Dhaqdhaqaaqani wuxuu kala firdhiyaa saameynta gaariga.
Treatment Daaweynta Dhulka oo Adag
Tangrui waxay leedahay daaha dhigaalka eleTangruio ee u dhigma heerka OE si looga hortago miridhku inuu yareeyo adkeysiga.
Se Kursiga caaga ah
Tangrui waxay isticmaashaa kursi kubbadeed oo balaastig ah. Burburka khilaafyada hooseeya iyo kala duwanaanta hoose ee miisaanka iyo nadiifinta ayaa sii hayn kara waxqabadka muddo dheer.
Stud Caleenta Kubadda adag & Jilicsan
Tangrui wuxuu yareeyaa culeyska dusha sare ee kubbadda iyadoo loo marayo habka gubashada, taasoo ka dhigeysa inay kubaddu siman tahay.
Waxay sidoo kale leedahay awood sare iyadoo la marinayo birta kaarboon, daaweynta kuleylka, iyo abuurista qabowga.
Nooca Kala-goysyada kubbadda
OEM Maya 1603545 1603544
Summad EE OPEL
Hore: TangRui Oem Ball Joint FOR OPEL-Z12068
Xiga: Gacanta Xakamaynta Abaalmarinta Hoose ee BENZ-Z5130
Wadajirka Kubadda ee Qalalan
Wadajirka Kubadda Tire
Lasoco Rod Ball Joint
Auto Qaybo Control Gacanta Ball Wadajirka NISSAN-Z1 ...
Dammaanad Tayo Ball Ball Joint-Z12054
Shiinaha Factory Supply Hakinta qaybo Ball Ku biir ...
Shiinaha Factory Car Hakinta Part Ball Joint- Z ...
Naxdinta Nuugista Bolt, Hood Shooga Nuugista, Wadajirka Kubadda Tire, Jabinta Steering Front, Gawaarida Hub, Naxdinta Rubber Rubber,